के कारणले कंगाल बनेका थिए यी धनी कलाकारहरु ? – Khabar Silo
के कारणले कंगाल बनेका थिए यी धनी कलाकारहरु ?
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन अभिनयका हिसावले आजपनि विश्वभर निकै चर्चित छन् । र उनको लाइफस्टाइलपनि कुनै देशको राजाको भन्दा कम छैन । तर कुनै एक समय यस्तो थियो जुन बेला उनी कंगाल बनेका थिए । जुन समय उनको घर समेत लिलाम गरिएको थियो । ९० को दशकमा उनले आफ्नो सारा लगानी लगाएर एवीसियल कम्पनी खोलेका थिए जुन असफल भयो र उनको सवै लगानी डुब्यो। र उनीलाई ९० करोड ऋण लागेको थियो ।
सीताराम पंचाल स्लमडॉग मिलेनियर, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जॉली एलएलबी, सारे जहां से महंगा, हल्ला बोल, बैंडिट क्वीन जस्ता चलचित्रमा सानदार अभिनय गरेका फोक्सोको क्यान्सरका विरामी थिए । उनीसँग आफ्नो उपचा गराउने पैसा समेत थिएन । फेसबुक मार्फत सहयोग मागियो तर पैसाको अभावमा उपचार नपाएर उनको मृ त्यु भयो ।
Posted on June 16, 2020 Author khabar silo
मंगलबार दिउँसो बेइजिङ र नयाँदिल्लीबाट लगभग उस्ताउस्तै समयमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो। भारतीय सैनिकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लद्दाखको गल्वानमा उपत्यकामा चिनियाँ सैनिकसँगको झडपमा परी एक अधिकृतसहित आफ्ना तीन जना सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी दियो। सोमबार रातिको उक्त घटना गल्वानमा पछिल्लो समय देखिएको तनाव मत्थर पार्न दुई देशबीच वार्ता चलिरहेका बेला भएको थियो। पछिल्लो समय […]
३ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को खोप पत्ता नलागे पनि अमेरिका खुल्ने बताएका छन् । उनले यस वर्षको अन्तिमसम्म कोरोना भाइरसको खोप पत्ता लाग्ने घोषणा पनि गरे । खोप पत्ता नलागे पनि अमेरिकीहरूको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किने उनले बताएका छन् । धेरै विशेषज्ञहरुले यस वर्षको अन्तिमसम्ममा कोरोना भाइरसको खोप […]
भारतिय चर्चित टिभि सिरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की अभिनेत्री दिव्या भटनागरको कोरोनाका कारण नि’धन !
Posted on December 7, 2020 Author khabar silo
काठमाडौ । भारतिय चर्चित टिभि सिरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की अभिनेत्री दिव्या भटनागरको मृ’त्यु भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण गम्भिर अवस्थामा उपचाररत ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की अभिनेत्री दिव्याको नि’धनले फेरी भारतीयहरुमाझ शो’क छाएको छ । ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ बाट नै चर्चामा आएकी उनलाई कोरोना पुष्टि भएको बारे सामाजिक […]
आजबाट नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने
अर्बपति राज कुन्द्राले नेपालमा शल बेचेर आफ्नो बिजनेशको सूरुवात गरेका थिए…